Cuntada & Nafaqada Archives - Page 2 of 8 - Daryeel Magazine
Muhiidda Ay Leedahay In Cabbista Caanaha La Joogteeyo
Caanaha oo kugu yaraadaa waxay sababaaan dhiig yaraan aad u daran, waxay sidoo kale sababtaa cudurka lafaha burburiya ee loo yaqaano Osteoporosis iyo xanuunoo kaloo la xidhiidha. Cabbista Caanuhu waxay si aad ah caafimaad ugu leeyihiin Jidhka qofka bili’aadanka ah. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qaar kamid ah faa’dooyinka faraha ee cabbista caanuhu u leeyihiin qofka bili’aadanka ah. Qormadaan waxaa …
Hab-dhiska dheefshiidka ee jidhku shaqooyinkiisa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in uu cuntada u burburiyo cuntada kana dhigo qaybo yaryar oo jidhku uu ka nuugi karo. Haddaba isbeddelka hab ololeedka dunida oo dad badan ku kallifa in ay cunaan cuntooyinka dhaqsaha loo diyaariyo oo aalaaba ay ku badan yihiin dufanka aan fiicnayn iyo xawaashyadu, iyo dhibta kale oo ah …
Bogga Internetka ee Fitness oo ka faallooda arrimaha caafimaadka ayaa qoray qaar ka mid ah faa’idooyinka ay raqaygu u leeyahay caafimaadka. Boggan laga leeyahay dalka Maraykanka oo qormadiisan waxa uu sheegay in raqayga ay ku jiraan Fiitamiinno aasaasi ah oo aad u tiro badan, sida Fitamiinka C, sidoo kalana ay ku jiraan maaddooyin si dabiici ah jirka u xuub siiba …
Asalaamu Calaykum Waraxamatullahi wabarakatuh. Bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa Rasuul Allah scw. Waxaan rabat maanta inaan idin la wadaago Maadada Magnesium oo ah nooc ka mid ah minerals. Magnesium waa nooc ka mid ah minerals yada muhiimka ah ee uu jidhku u baahan yahay. Waxay ka mid tahay anti-inflammatory minerals oo ka hortaga cuduro aad u fara badan. Magnesium waxa …
Baamiyuhu wuxuu ka mid yahay khudaarta as-aasiga u ah dheefsinta bini’aadamka balse dad badan aanan aqoon qiimaha uu leeyahay baamiyaha, waa geed aad uga baxa dalkeena laguna beerto labada wabi inta u dhaxayso. Nafaqada baamiyaha: Baamiyaha waxaa aad uga buuxo vitamino iyo macdano, waxaa ka mid ah vitamin A, B, C, E, iyo K, Macdanaha calcium, iron, magnesium, potassium, iyo zinc …
Sisinta waa miraha ugu qadiimsan ee saliidda laga dhaliyo oo uu bani aadamku bartay.Waxa ay ka bixi jirtay meelo badan oo dunida kamid ah muddo ka badan 5000 sano. Dalaggan waxa uu taariikh u leeyahay awooddiisa ah inuu ku koro dhul ay adagtahay inay ku baxaan miraha kale ee la beerto; waana dalag adag oo kaalmo badan uga baahneyn beeraleyda, …
Maxaad Ka Taqaan Waxtarka Iyo Khasaaraha Midhaha Flax seed (Qoondarka)?
Waxaan maanta inshaAllah halkan ku sharaxayaa midho yaryar oo buniga ama huruud ah oo la idhaah ( Flax seed) . Soomaalina waxaa lagu idhaah Qoondar ama Saliib. Midhahani waa midho cafimaadka siyaabo badan uugu fiican. Loona isticmaali karo siyaabo kale duwan. Haddaba halkan ka baro midhahan khayr kooda iyo sharkoodaba iyo waliba habka loo isticmaalayo. Midhahani waa midho laga heli …
Beerku waxaa uu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee jirkeenna waxaa uu qabtaa howlo badan waxaa ka mid ah in uu burburiyo ama jirka ka saaro sunta soo gasha, waxa uu kaalin mug leh ka qaataa shaqada hab-dhiska difaaca, sidoo kale dufanka dheeraadka ah ayaa uu jirka ka saaraa. Maadaama ay aad ubateen cunista cuntooyinka dufanka leh, cuntooyinka shiilan …
Waxaa la isku raacsan yahay in caanaha geelu ay yihiin kuwa ugu waxtarka iyo caafimaadka badan marka laga reebo caanaha hooyada. Waxay daawo u yihiin xanuuno badan. Caanaha geela waxaa ku jira 3 laab Fiitamiin C-ga ku jira caanaha Lo’da, waxaa kaloo ku badan potassium, Phosphorus, zinc, iron,manganese, fiitamiino, minerals, iyo amino acids. Waxaa Caanaha geela ku jira 200 wax ka …
Shaahu wuu noocyo badan yahay faaidadiisana waxay ku xiran tahay hadba nooca caleenta la isticmaalay. Shaahu ma lahan nafaqo tamar leh “calories”, oo qofka cayil ku kordhiya sidaa awgeed shaaha kaliigiis hadii uu qofku joogteeyo kuma cayilo. Shaaha waxaa ku jira maadooyinka sunta saara ee loo yaqaan “antioxidants” kuwaas oo jirka ka caawiya inuu iska saaro wixii aan faaido u …
Kaalshiyamtu sida laysla ogyahey waa macdanaha ugu baden ee laga helo jidhka bani aaden ka, isla markaana waxey leedahey faa,iidooyin muhiim u ah jidhka guud ahaanba, 99% ka mid ah kaalshiyamta waxa laga helay lafaha iyo ilkaha, halka 1% soo hadheyna laga helo dhiiga, muruqyada iyo dareerayaasha kale ee jidhku leeyahey.Kaalshiyamtu waxey door muhiima ka ciyaartaa dhismaha lafo xoogan. Inuu …
Wadne qabadku waa khatar caafimaad, dhimashada ugu badan ee aduunka waxaa sababa xanuunada ka dhasha wareegga dhiigga, wadne Qabadka wuxuu dhacaa markii xididka quudiya muruqa wadnaha uu xannibmo. Socodka dhiigga ayaa ka joogsada qayb wadnaha ka mid ah, Haddii aan isla markiiba la daaweyn, qaybtaan muruqa wadnuhu way dhimataa. Website ka healthycures ayaa waxa uu soo bandhigay cuntada caafimaadka leh …
Caadi ahaan dad badan ayaa jecel inay maalintooda ku bilaabaan koob bun ah oo ay aroorta hore cabbaan iyaga oo aaminsa in koobkaasi uu yahay indho fur iyo in maskaxdu ka soo wada baraarugto hurdadii habeennimo, qofkana ku beero firfricooni iyo in dardar la galo hawlihiisa maalintaas. Laakiin daraasado cilmiya oo bunka lagu sameeyey ayaa daahfurtay in bunku uu qofka …
Cunista muuska ee maalin kasta waxa ay u leedahay faa’iidooyin aad u badan jidhka bini’aadamka, iyada oo midhahan ay ku jiraan nafaqooyin aad u weyn iyo maadooyinka loo yaqaano “antioxsidenter” ka ee ka hortagga dhaawacyada soo gaadha unugyadda. Waxa sido kale midhahani ay xoojiyaan habka difaaca jidhka iyo wanaajinta dheef-shiidka,sidoo kale waxa ay kaa caawiyaan ka hortagga ah tiro badan oo …
Qorfuhu waa dhir cunto oo aad u udgoon isla markaana dhadhan fiican leh. Waxaa qorfaha daawo ahaan loo isticmaali jiray mudo kumaan sano ah waa loo aaminsanaa inuu yahay daawo dhaqameed caafimaad badan. Waxaa jirtay waqti qorfuhu ka qaalisaanaa dahabka!. Sayniska casriga ah ayaa ka markhaati kacay dhaqankaas soo jireenka ah waxaana la xaqiiyay in qorfuhu yahay daawo waxtarka badan Hadaba waxaynu halkaan …